Ayobe okanye usizi? | Apg29
Ayobe okanye usizi?
Ngaba ndiya kuba kokungalunganga imbandezelo kunzima lithe qwele, ndiya ngoko nangoko ndibhengeza ukuba oku kuzaliseka wesiprofeto kwaye kufuneka babuye umva Umchasi, kwaye kuya kufuneka ukuba eve iimbandezelo omkhulu. Kodwa ukuba mna ekunene kwaye wonke umntu ucinga njalo - ukuba uYesu angabuya nanini na ixesha kwaye kuyenza - abo ukulishumayela akukho thuba walungisa umyalezo wabo, ukuba singenza ngoko.
Ukholo zakithi! Ngokuba thina, ukuba sikholwa ukuba uYesu uza kuza ngaphambi okanye emva kwembandezelo. Kubalulekile ukuba ndiyibone - usindiso olusenza ukuba nangona baneembono ezahlukeneyo ngalo mba.
Umba enkulu enxulumene oku: sibekela njani ukuba kwezi ndlela zimbini?
Kuba ndigqibe kwelokuba kuvuka abantu phambi uYesu angabuya nanini na ixesha - wayelungele kuyo!
Abo bakholelwa ukuba siza kufumana zombini Umchasi kunye nobunzima imbandezelo, uyakubona oko kubalulekile ukuba endiyilungiselele yona.
Bathi bona ukuba uluvo lwam kuthetha ukuba zenza zibe kwimeko apho sikulungele nokuba Umchasi okanye ukubandezeleka. Mhlawumbi ke bekuya kuba lokubaleka kunye iingcinga ezizele yiminqweno - akulunganga.
Kulungile Mna mhlawumbi ngaphezu nawuphi na umKristu kweli lizwe walumkisa ukuba ngaphandle kokuba uYesu uyeza kamsinya, sinokulindela ukuba ukubandezeleka kakhulu ngexesha lemfazwe, eziya kuthi, apho eRashiya unendima engundoqo .
Mna ke ziyacelwa ukulungiselela ukubandezeleka kunye namaxesha anzima, ngokuphinda ukuze ube nokufikelela kumanzi kunye nokutya iimfuno.
Oku kuya kuba ukubandezeleka yasekuhlaleni efana kwamanye amazwe amaninzi kangaka abe ukubandezeleka kakhulu, kutheni ezininzi izizwe zehlabathi kude uThixo asinde?
I nangoko babekubhengeza
Lo msebenzi ke akufuneki ukuba bedidekile kunye kwimbandezelo lonke endicinga ukuba siza kusinda. Umbuzo yeyiphi enye into embi: Ukuze athi ukuba asinako ukulindela ukuba uYesu ngoku - okanye thina singakwazi?
Ngaba ndiya kuba kokungalunganga imbandezelo kunzima lithe qwele, ndiya ngoko nangoko ndibhengeza ukuba oku kuzaliseka wesiprofeto kwaye kufuneka babuye umva Umchasi, kwaye kuya kufuneka ukuba eve iimbandezelo omkhulu.
Akukho thuba walungisa umyalezo wabo
Kodwa ukuba mna ekunene kwaye wonke umntu ucinga njalo - ukuba uYesu angabuya nanini na ixesha kwaye kuyenza - abo ukulishumayela akukho thuba walungisa umyalezo wabo, ukuba singenza ngoko.
Ngamangcwaba ke ngoko ukuba abo bathi ukuba iziganeko ezahlukeneyo kwenzeka phambi kukaYesu, kuba bandakanyeka kwaye igalelo abantu bemlindile uYesu, kodwa cinga iziganeko ziya kuqala ukuba kwenzeka ngaphambi kokuba.
Kuya kuchaphazela indlela yobomi, yehlabathi, kanye sisaxakeke ezabo izinto, zingezizo elinde ukuba uYesu okanye sikulungele ukuhlangabezana kuYe.
Abo baye negalelo kule eneneni isimo sengqondo esinjalo kunye iingcinga efanayo njengoko umkhonzi echazwa "ububi" awayefundisa uYesu xa kufikwa ekufikeni kwakhe.
Wathi umkhonzi kuye: "Nkosi yam iya kuthabatha." Mateyu 24: 48
Masingaze libe njengongendawo umkhonzi!
Amanqaku kunye neevidiyo ezenziweyo ngamanye kwe Apg29.nu ukuze ayazi ukuba site blog musa ukwabelana.
Vecka 25, tisdag 18 juni 2019 kl. 05:12